Fitaterana amin’ny sarety tanana : seho iray manambara ny tsy fivoaran’ny toekarena | NewsMada
Fitaterana amin’ny sarety tanana : seho iray manambara ny tsy fivoaran’ny toekarena
Endriky ny fitaterana iray mahazo vahana eto an-dRenivohitra ny sarety tanana, tato anatin’ny 10 taona farany. Amin’ny lafiny iray, seho manambara ny tsy fivoaran’ny toekarena ankapobeny ; amin’ny lafiny iray hafa, manampy betsaka ireo tsy anasa sy ny mpivarotra. Fanadihadiana.
Mikororosy fahana ny fitaterana entana amin’ny fiarakodia, indrindra ny entam-barotra, eto Antananarivo. Zara raha misy miasa ireo fiara 3CV, 404 noho ny fahanteran’izy ireny. Na misy mahasolo fiara vaovao aza ny tompony, tsy mahazaka indray ny maro anisa mila izany noho ny fahalafosan’ny saram-pitaterana sy ny krizy ara-toekarena amin’ny ankapobeny. Tafiditra anatin’izany krizy izany ny fitaterana entam-barotra eto an-dRenivohitra, ka manavotra izany, ankehitriny, ny sarety tanana.
Maro ireo kaoperativa manana sarety ampanofàna hoentin’ireny tovolahy ireny, anisan’izany ny Mampitasoa, Manana, CocaCola, Fanamby, Ankadifotsy sy ny maro hafa. Ny iray amin’ireo, misy manana sarety tsy latsaky ny 50. Samy hofaina avokoa ny sarety isanisany, ampiasan’ny mpitatitra roa na telo lahy, miasa isan’andro manomboka maraina hatramin’ny hariva mitaona entana mody. Lavin’ireo mpitatitra ireo ny fotoana nomen’ny kaominina azy ireo aorian’ny 6 ora hariva tokony handehanan’ny sarety an-dalambe.
“Tsy maintsy miasa amin’ny andro antoandro izahay, satria ny antoandro ihany ny famoahana entana any amin’ireo mpivarotra ambongadiny sy hitaomana ihany koa ireo entam-barotra hafa alaina na aterina eny an-tsena”, hoy ireo mpitatitra eo Analakely. “Tambin’izany anefa, manaiky izahay amin’ny tsy maintsy ho fanajana ny lalàn’ny fifamoivoizana. Manaiky ihany koa amin’ny tsy fahazoana miditra any amin’ny faritra sasany, ohatra, ny eny Ambohitsorohitra”, hoy ihany ireo mpitatitra ireo.
Azo tombanana ampolony maro ireo sarety tanana mitaona entana eto an-dRenivohitra. Misy vondrona mpitatitra maro toy izany koa, samy manana ny faritra mahazatra azy avy sy ny mila azy, toy ny eny Anosibe, Andravoahangy, Isotry, Analakely Pochard na Petite Vitesse. Araka ireo toerana ireo, ao ny “mpanjifa” na tompon’entana, manana ny sarety mahazatra azy, maka sy manatitra entana amin’ny toerana efa mahazatra ihany koa.
Maharesy 3 CV : mahazaka entana karazany maro
Betsaka ny vola mihodina amin’ireo sarety mpitatitra, manomboka amin’ny hofany amin’izay kaoperativa tompony, karaman’ireo mpitatitra, saran’ny fijanonana alain’ny mpiandraikitra amin’ny tsena sasany, fanamboarana sy ny fikojakojana azy ireo na mahalana aza. Tsy mitovy daholo anefa izany, samy manana ny azy. Kaoperativa sasany, manana sarety tsy latsaky ny 50, mampanofa 9.000 Ar isan-kerinandro ny iray ; saram-pitaterana rehefa vita ny adivarotra, 4.000, 6.000, 10.000 Ar … Miankina amin’ny mahazatra : tompon’entana, karazan’entana, toerana, lalana aleha, toetr’andro. Misy amin’ireo tompon’entana ireo, manana ny mpitatitra raikitra efa mahazatra azy.
Miantoka taratasy avy any amin’ny kaominina izay misahana ny kaoperativa, tompon’ny sarety miasa. Ao koa anefa ireo manana ny azy manokana tsy manofa. Raha tsy tompon-toerana indray ny mpitatitra miditra amin’ny tsena iray, ohatra eny Anosibe, mandoa sarany 200 Ar ho an’ny parking. Na amin’ireo izay mifindra trano aza, tsy vitsy ny mitady sarety, zakan’ny fahefa-mividin’ny maro sady mahazaka entana betsaka ihany koa. Sarotra hita kosa no lafo izay fiara tena mahazaka betsaka.
Lavin’ireo mpitatitra ireo ny filazana fa izy ireo no mahatonga ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra. Iaraha-mahita kosa, ny faharatsian-dalana miampy ny fahamaroan’ny fiara. Raha mbola izao ny toerana misy ny toekarem-pirenena, tsy maintsy hitombo isa hatrany ny sarety tanana mpitatitra.
Manome asa maro : mitaky hery goavana, aina no manefa
Mampiasa olona betsaka ny sarety tanana, raha ny kaoperativa iray manana 50, midika izany fa mampiasa olona tsy latsaky ny 100. Tsy mifidy entana hoentina rehefa mazava tsara fa tsy halatra, araka ny nambaran’ireo mpitatitra. Miankina amin’ny vesatry ny entana, karazany, toerana hakana na hanaterana azy ny saram-pitaterana. Toy ny raharaham-barotra rehetra, misy ny adivarotra amin’ny ankapobeny. Mitaky hery goavana anefa izany, tsy maintsy aina no manefa ! Misy mihitsy ny misafidy manao io asa io, mahita fidiram-bola bebe kokoa raha mampitaha ny karama ho azy any amin’ny orinasa sasany.
“Mahavonjy mpivarotra maro ireo sarety ireo, raha ny tena marina, ireo mihitsy izao no tena miantoka ny ampahany be indrindra amin’ny fitaterana ireo entam-barotra eto amin’ny tanàna. Ny fiara aloha, indrindra ny 3CV raha mbola misy, tsy mahazaka ny zakan’ny sarety. Ny amin’ny karama kosa, ireny fiara sisa miasa ireny, somary mifaninana amin’ny sarety ihany”, hoy ny sasany amin’ny mpivarotra. Hatramin’ny mpivarotra ambongadiny eny amin’ny toerana sasany maka sarety mitaona ny entany. Misy manana fiara amin’izy ireny, saingy raha atao ny kajy, mora kokoa ho azy ireo ny sarety.
R.Mathieu, sary : Njato Hervé.